CAR T (Chimeric Antigène Receptor-T Cell)
Ny fandaharan'asan'ny Sorrento fitsaboana sela dia mifantoka amin'ny Chimeric Antigène Receptor-T Cell (CAR T) ho an'ny immunotherapy cellule adoptive mba hitsaboana ny fivontosana mafy sy rano.
Ny programa CAR T dia misy CD38, CEA ary CD123.
Ny CD38 CAR T an'i Sorrento dia mikendry sela tsara CD38 avo lenta, izay mety hametra ny poizina eo amin'ny tanjona / ivelan'ny tumor.
Ny kandida CD38 CAR T an'ny orinasa dia tombanana amin'ny myeloma (MM) maromaro. Ny fandaharan'asa dia nampiseho tamim-pahombiazana ny hetsika miady amin'ny fivontosana mialoha ny fitsaboana amin'ny maodely biby ary amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny fitsapana dingana 1 ao amin'ny RRMM. Fanampin'izany, Sorrento dia nitatitra ny angon-drakitra avy amin'ny fitsapana Phase I momba ny antigène carcinoembryonic (CEA) tarihin'ny programa CAR T.
Ny orinasa dia manombana ny CD123 CAR T amin'ny leukemia mieloid acute (AML).
DAR T (Dimeric Antigène Receptor-T Cell)
Sorrento dia mampiasa teknolojia knock-out knock-in (KOKI) an'ny tompony hanovana ny sela T avy amin'ny mpamatsy ara-pahasalamana ara-pahasalamana mba hamolavola azy ireo hanehoana ny mpandray antigène dimeric ao amin'ny faritra T-cell (TCR) alpha chain constant region (TRAC). Amin'izany fomba izany, ny TRAC dia voadona ary ny antigène dia voadona ao amin'ny toerana misy azy.
Ny Dimeric Antigène Receptor (DAR) dia mampiasa Fab fa tsy scFv ampiasain'ny sela T Chimeric Antigène Receptor (CAR). Mino izahay fa io DAR io dia naseho tamin'ny fandalinana mialoha ny klinika manokana, fahamarinan-toerana ary hery.
Ireo mpandray antigène chimeric (CARs)
CAR T Cell Technology amin'izao fotoana izao
Next-Gen Dimeric Antigène Receptor (DAR) Technology